केही मान्छेहरू प्रगतिको चक्रलाई रोक्न चाहन्छनः गाैतम - Dainik Nepal
केही मान्छेहरू प्रगतिको चक्रलाई रोक्न चाहन्छनः गाैतम
दैनिक नेपाल २०७६ असोज ९ गते ९:११
बेल्जियम /प्रस्तोता : डिल्ली अम्माई
बाग्लुङ्गको दुर गाउँबाट संघर्षका विभिन्न चरणहरु पार गरेर बेल्जियम आएका एक जुझारु एनआरएन हुन्, गंगाधर गौतम । एनआरएनए बेल्जियमका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका गौतमको अथक सक्रिय जीवन, सामाजिक भावना र उनीभित्र लुकेको कुशल रणनैतिक क्षमताले बेल्जियममात्र नभएर युरोपमा समेत एउटा गतिलो उपाधि पाएको छ’ आधुनिक चाणक्यको । उनको रणनीतिलाई शुरुमा धेरै उनका बिरोधीहरूले बुझ्दैनन् र परिणामपछि भने टाउको ठोकीठोकी चुक्चुकाउछन् । उनको त्यो क्षमतालाई कसैले रुचाउछन, कसैले रुचाउदैनन त्यो सम्बन्धित पक्ष विपक्षको निजी कुरा हो ।
पारिवरिक जिम्मेवारी र कानूनी तथा प्राबिधिक झन्झटबीच पनि आफ्नैपनमा बाँच्न सक्ने नेपाली कांग्रेशका प्रबास स्थित ससक्त कार्यकर्ता समेत हुन् उनी । आर्थिक आर्जन वा आस्थाको धार नछुट्याइ हेर्दा युरोपकै कुशल पार्टी रणनीतिकार भन्दा फरक नपर्ला यी नेपाली वयस्कलाई । उनी अर्थात् राजनीतिक खोपीभित्र आफ्नै खेमाको हुन नसकेका, तर स्वतन्त्र आँखाबाट हेर्दा लेखिनुपर्ने, सम्झिनुपर्ने डायस्पोराका एक बिबादित पथिक ।
युरोपभरि जनसम्पर्क समितिको बिस्तार र एनआरएन भन्दै कुदिरहने एक जुझारु अभियन्ता उनै गौतमसंग एनआरएन, उनको उमेद्वारी लगायत अन्य बिषयमा गरिएको कुराकानी ।
तपाइका मित्रहरू पनि छन् र अमंगल चाहने जमात पनि तपाइको संगठन भित्रै देखिन्छ गंगाजी ! किन होला ? यति बिध्न बिरोध गर्नु पर्ने तपाइको के गल्ति थियो र संगठनभित्र ?
छोटकरीमा भन्दा म अलिक लचिलो छु र उदार पनि छु तर केहि जमात संकीर्ण र स्वार्थि छ समाजमा। यी दुइ दृष्टिकोण नभएको समाज कहाँ पो होला र ! समाजमा परम्पराबादी सोच राख्ने र परिवर्तन गर्न चाहने मानिसहरूका बीचमा युगौँदेखि द्वन्द चल्दै आएका छ । संसारभर चलिरहेको त्यो द्वन्द नेपालमा पनि छ यता पनि र सर्बत्र छ । द्वन्दात्मक मनोविज्ञान नेपाली डायस्पोरामा पनि संगै भित्रिएको छ। केहि मान्छेहरु सामाजिक एकता,सद्भाव र प्रगतिको चक्रलाई रोक्न कोशिस गरि रहन्छन । तर त्यो चिरस्थाई कुरा हैन । एक निबन्धकारको शब्दमा भन्ने हो भने,’त्यस्ता बिरोधको प्रबाह नगरी क्रमभंगताको लागि प्रत्येक युगमा केही मान्छेहरू बहुलाउनु पनि पर्दछ । केही मान्छे बहुला नभईकन समाजको विकास नै हुँदैन ।अमेरिकामा अब्राहम लिङ्कनले दासप्रथा उन्मूलन गर्दा उनलाई अमेरिकाका जनताको एक हिस्शाले बहुलाएको भने । केहि स्थानमा त दासहरू नै लिङ्कनको विरुद्ध उभिएका थिए । ती दासहरूको सोचाइ दासप्रथा नै ठीक छ र त्यसैमा उनीहरूको सुरक्षा छ भन्ने थियो । आखिर सबै सोचको स्तरमा निर्भर रहने कुरा हो। मैले मेरो जिबनमा धेरै किसिमका यस्ता आरोप खेपेको पनि छु र अझै खेप्ने सामर्थ्य पनि राख्छु ।
सोचबारे तपाइको बुझाई अलिक प्रष्ट पारिदिनुहोस न !
‘मान्छेको सोच उसको ब्याक्तिगत स्वार्थले निर्दे्शित गर्यो भने एक प्रकारको हुन्छ र सामाजिक स्वार्थले निर्देशित गर्यो भने ठीक त्यसको बिपरित हुन्छ। कतै पढेको थिएँ,कुनै व्यक्तिलाई जन्मकालदेखि नै अँध्यारो गुफामा राख्ने, बाहिर निस्कन नदिने हो भने ऊ त्यसैलाई संसार सम्झन थाल्छ र दृष्टिकोण पनि त्यहि अनुशार बनाउछ । कुनै दिन उसलाई गुफाबाट बाहिर ल्याइयो भने, बाहिरी वातावरण वा प्रकाश देख्यो भने आत्तिन्छ । हत्तपत्त दौडिएर अँध्यारो गुफामा जान खोज्छ । मानवको स्वभाव के हुन्छ भने ऊ जुन कुराका लागि अभ्यस्त हुन्छ, त्यहि कुरा नै स्वीकार्छ। मैले संसारलाई यसरी नै बुझ्छु। दृष्टिकोण बनाउने भनेको वातावरण र परिबेशले पनि हो।
वातावरणको कारणले भन्नु पर्दा डायस्पोरामा पुगेका नेपालीहरुको मुलभुत रुपमा दुई फरक दृष्टिकोण पाइन्छ। गाउँबाट युरोप, अमेरिका अष्ट्रेलिया लगायत स्थानमा आएकाहरुको अपबाद बाहेक सामाजिक भावना धेरै र स्वार्थि भावना कम हुन्छ भने शहरबाट वा त्यसमा पनि उच्च घरानाबाट आएकाहरुमा ब्याक्तिबादी भावना पर्वल र सामाजिक भाबना कम देखिन्छ। यो सब गाउँ र शहर बिचको फरक पनि हो। ठुला सहरमा हेर्ने हो भने, धेरै मान्छेहरूको घरमा जाने हो भने थाहा हुन्छ, आफैले हुर्काएका छोराछोरी अमेरिका, जापान, जर्मनी, युरोप, अष्ट्रेलिया गएपछि बाउआमालाई भुलिदिन्छन् । खाली एकपटक सम्झन्छन्, श्रीमती सुत्केरी भएका बेलामा । सुत्केरी भएका बेलामा विदेशको मानिसलाई नै सहयोगी राख्दा त्यहाँ धेरै महङ्गो पर्न जान्छ । यस्तो बेलामा बाउआमालाई बबिता दिज्युले भने झैँ ‘तेल भिषा’मा मात्र बोलाउँछन् । तर गाउँले परिबेशमा हुर्केर आएकाहरुमा यदाकदा बाहेक आफ्ना अग्रजहरुको सेवा सम्मानमा आँफुलाई भरसक समर्पित गरेका हुन्छन। आफ्नो गाउँको परोपकार र समृद्धिको लागि सामाजिक अभियानहरु चलाई रहेका हुन्छन। शहरियाहरुले गरेको विरोधलाई उनीहरुले कुनै हेक्का राख्दैनन्। अब त कुरो बुझ्नु भो नी डिल्ली दाई ?
तपाईको राजनीतिक दृष्टिकोण र लगाबबारे केहि प्रष्ट पार्नु हुन्छकी ?
ब्यक्तिको आफ्ना समकालीन व्यक्तिहरू र अघिल्ला पुस्ताहरूका मानिहरूसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्धहरूको समष्टि यो समाजलाई हामीले के दिन सक्छौं ? मूलकुरा यसैको वरिपरि हुन्छ । त्यसको लागि राजनैतिक बहस अनिबार्य छ। मानब स्वाभाब अनुरुप राजनीतिका भिन्न दर्शनबारे बहस हुँदै आएको छ। म सुखी र सम्पन्न बन्ने वा हामी ? दार्शनिक नेता महामानव बिपीले यो बहस सर्वप्रथम नेपालको राजनीतिमा भित्र्याउनु भयो। उहाँले आफ्नो वरिपरिका समर्थकहरुलाई आफ्नो निचोड पनि सुनाउनु भयो। एक्लो घर धनि बनेर देश वा समाज सम्पन्न हुँदैन तर राज्य सम्पन्न बन्यो भने नागरिक स्वतः सम्पन्न हुन्छन। सामाजको दुख सुख सबै अन्तर सम्बन्धि छन्। दुःखसुख बराबरीको सोच समाजवाद बिना सम्भब छैन । दुःखसुख मानव जातिमै हुन्छ । समाजवादमा मेरो सुख, तेरो दुःख हुँदैन । जति सुख छ मानव जातिको हुन्छ, दुःख पनि मानव जातिकै हुन्छ । यही आदर्शको परिवरि हजारौं वर्षदेखि संसारभर बहस चल्दैछ । सामुहिक हितको सोच नै समाजबादी सोच हो। परिबर्तनको खोजिले मलाई राजनीति प्रति रुचि पैदा गर्यो। समाजबाद उत्कृष्ट समाज ब्याबस्था हो भन्ने निष्कर्षले नै मलाई बिपीबादी र कांग्रेश बन्न प्रेरित गरेको हो ।
तपाइको जीवनका उतार चढाबबारे केहि बताई दिनुहोस, गंगाजी !
बाग्लुंगको गल्कोट पुर्व प्रधान मन्त्रि झलनाथ खनाल ,पुर्व उपप्रधान मन्त्रि चित्र बहादुर केशी ,सहिद थिर बम मल्ल, नेता कुलराज शर्मा, गोबिन्द कंडेल लगायत धेरै नेताहरुको कर्म थलो मात्रै नभएर राणा काल देखि नै राजनीतिको चेतना छरिएको ठाउँ हो। म उहाँहरुकै अप्रतक्ष प्रेरणा, द्वन्द प्रतिद्वन्द र झकझकावटबाट ब्युझेको केटा थिएँ। काढेबास पढ्दा सानो कक्षामा समेत मनिटर हुनुपर्ने,रेडक्रसमा अध्यक्ष हुनु पर्ने साथै पंचायत बिरोधि समेत बन्नु पर्ने । म त्यहिबाट सानो नेता हुँदै बाग्लुंग क्याम्पसमा नेबि संघबाट स्ववियु सभापति(२०५१ /५५) र विद्यार्थीको जिल्ला अध्यक्ष(२०५३ /५७) निर्वाचित भएँ। सक्रियता तथा राजनीतिको भोकले नेतृत्वमा पुर्यायो। कुनै नेताको चाकडीमा भन्दा आफ्नो सामर्थ्य र सक्रियताले म नेतृत्वमा पुगेको हुँ। बाग्लुङ्गका प्राय सबै गाबिसका स्कुलहरुमा मैले नेबि संघको इकाई बनाएको थिएँ। त्यसपछि मेरो सक्रियता देखेर म माथि बाम पन्थीहरुको आक्रमण हुन थाल्यो। आर्थिक अबस्था निम्न मध्यम बर्गीय किशानको भएपनि ब्याचलर सम्मको अध्ययन पुरा गरेको छु ।
तपाइको लक्ष,खुबी र सामाजिक सक्रियताबारे केहि बताउनु हुन्छकी !
राजनैतिक सक्रियताका कारण म घुमी रहनु पर्ने, एकै स्थानमा बस्ने नसक्ने र साथीहरुको टिममा रमाउने बानीले गर्दा क्याम्पसमा अध्ययन समयमा समेत आर्थिक अभाव राम्रैसँग झेलेको छु । पढाइकै बीच खर्च जुटाउन समेत विभिन्न हण्डर खाँदै पढाइलाई जसोतसो सुचारु गराएँ । पैसा नहुँदा पनि बाँच्न जानें। त्यो नै मेरो सबैभन्दा महत्वपुर्ण खुबी हो। अहिले एनआरएनमा ’पैसा फ्याको तमासा देखो’जस्तो भएको छ। यो सब देख्दा दुख लाग्छ। संघ संगठनहरुमा पहिले पहिले त्याग, पबित्र भावना र सक्रियतालाई संगठनको पुँजी मानिन्थ्यो। अहिले पैसा कमाउन सके अरु सबै किन्न सकिन्छ भन्ने सोच देखिन्छ। यो सोचले कुनै पनि संघ संगठनहरु दिर्घकालसम्म बाँच्न सक्दैनन् ।
तपाइको पार्टी नेतृत्व, सबै समाजबादी हौं भन्ने राजनैतिक दल लगायत, सहकर्मीहरुलाई के सुझाब दिन चाहनु हुन्छ ?
डायस्पोराको समृद्धिमा समेत सरकार र पार्टीहरु लागुन,उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न नागरिक बनाइयोस, सबैले आफ्नो आचरण सुधारुन र समाजबादी बनुन। मेरो यही सुझाब हो सबैलाई। सक्रियताको कुरा गर्दा अहिले पनि अचम्म लाग्छ। बिद्यार्थी कालमा निकै सक्रिय थिएँ म। संगठनको काममा बाग्लुङ्ग बजारबाट बिहान पाँच बजे हिडेर बुर्तिबाङ्ग पुगिन्थ्यो। बर्खामा हिड्दा सरिरमा जुकाले नखाएको कतै हुँदैनथ्यो। टिमुर वा नुन दलेर हिड्नु पर्ने ! ६२ गाविसमा मैले नबनाएको कुनै बिद्यार्थी इकाई थिएन। जुन अहिलेसम्म कसैले बनाएको मेरो जानकारीमा छैन। त्यति खटिन्थ्यो।२०४५ सालको घटना हो जन आन्दोलन चलेको थियो। किरण पौडेल,हर्क खत्री लगायत हामी ११ जनालाई आन्दोलनको क्रममा प्रहरीले समात्यो। जनताले राजबन्दी रिहा गर्न हरिचौर प्रहरी चौकी घेरा हाले । त्यहाँ ऐतिहाँसिक प्रदर्शन भयो। त्यो संघर्षको गौरबमय दिनको मलाई सँधै याद आइरहन्छ ।
तपाइले संगत गरेका,नेबि संघमा संगठित गरेका साथीहरु अहिलेसम्म राजनीतिमा कति छन् ?
अहिले विभिन्न इकाईबाट संगठित भएका साथीहरुले युरोपमा नेतृत्व गरिरहेका छन्। बाग्लुङ्गका पूर्ण हमाल,एकराज गिरि, वसन्त श्रेष्ठ, नारायण आचार्य,राम थापा, धर्म पाठक लगायतका साथीहरु त्यहि बेलाका सहयात्रीहरु हुन्। उनीहरु अहिले प्रतिष्ठित ब्याबशायी, समाजसेवी समेत बनेका छन भने नेपालमा किरण दाईहरु राजनीतिको नेतृत्वमा समेत पुगेका छन् ।
बेल्जियम जनसम्पर्क समितिको एकता अभियानबारे के प्रगति भैरहेको छ , बिबाद सल्टियो कि उस्तै हो ?
केही ब्याक्ति निबर्तमान भैसकेपछि पनि म अझै नेतृत्वमै छु भन्ने हो भने बिबाद बल्झी रहन्छ। अग्रज दाजु गोबिन्द सुबेदीको नेतृत्वमा ११ जनाको अल्पकालीन समिति बनेको छ। त्यसले पुरानो समितिलाई बिस्थापित गरि सक्यो। अब एकै ठाउँमा बस्न किन डराउने ? सोहि अनुरुप पार्टीलाई पत्राचार भएको छ। माइन्युट गरिएको छ। पार्टीलाई सन्देश दिदा त्यसले बैधानिकता पाउने हुन्छ। पहिला धेरै हदसम्म नेपालको धारले केहि असर गरेको होकी भन्ने मेरो बुझाई हो। सारमा भन्दा अब हामी एक भएका छौं। यदि अब पनि यो निर्णयलाई मान्दिन भनिन्छ भने संगठनमा बस्नुको औचित्य रहदैन ।
जनसम्पर्क समिति बेल्जियममा एकताको कुराबारे प्रष्ट भन्नु पर्यो,यो त लार्बरे कुरो भेनर ?
मलाई कतै पढेको कुरा याद आयो। कुरा भारत तिरको हो। त्यहाँ मागी खानेका पनि डन हुन्छन भन्दा तपाइलाई अचम्म लाग्ला। मागी खानेहरूले दिनभरि मागेको पैसा तिनका डनहरूलाई बुझाउनु पर्ने हुँदो रहेछ। जति धेरै माग्ने भयो डनहरुलाई त्यति नै फाइदा हुने। त्यसकोलागि उनीहरूले गाउँगाउँमा गएर केटाकेटी चोर्छन् र तिनीहरूका हातखुट्टा भाँचिदिने, आँखा फोरिदिने गर्दछन् । उनीहरूलाई अङ्गभङ्ग गर्दिन्छन् र बाटोमा माग्न बसाल्छन् रे । उनीहरुले माग्ने संजालको बिस्तार गर्न त्यसो गरिरहेका हुन्छन। त्यसैमा उनीहरु निरन्तर लागि रहन्छन र सन्तुष्ट हुन्छन। राम्रा मान्छेहरुले राम्राको झुण्ड बनाउन खोज्छ,नराम्राहरुले प्रतिशोध लिन र राम्राको खुट्टा तान्न खोज्छ। सद्धे मान्छेलाई अपाङ्ग बनाएर गलत साबित गरेर आफ्नो झुण्ड बलियो बनाउने मान्छेहरु पनि हाम्रो बिचमा हुन्छन। खराब र असल छुट्ट्याउ, मिलापमा रमाउन सिकौं। फुटमै रमाउन नखोजौं, सबै सम्मानित बनौँ र एकतालाई समर्पण सहित लागु गरौँ। अब बानि बदल्ने बेला आएको छ किनकि पुरानो सोचले संगठनलाई धराशायी बनाउछ। संगठन सकिएपछि निश्चित रुपमा हामी पनि सकिन्छौँ। प्राबिधिक कुराले मात्र संगठनको एकताबारे बुझ्न सकिदैन। त्यसको लागि छरिएका मनहरु मिल्नु पर्छ।
नेपालमा राजनैतिक आधार बनाइसकेको मान्छे कसरि र किन विदेश पलायन हुनु भो ?
मुलुकमा राजनीतिक द्वन्द्वले अत्यासलाग्दो अवस्था त बिदेसिनुको आम कारण हो। २०५४ सालमा घरमा आगो लगाइयो। म नेबि संघको जिल्ला अध्यक्ष थिएँ त्यो बेला। गल्कोट हटियामा म माथि सांघातिक आक्रमण समेत भयो। घर नजिक बम बिष्फोट गरियो। ज्यानको जोखिम भएपछी मात्र म विदेश पलायन भएको हूँ। मेरो सन्दर्भमा आर्थिक कारण गौण हो। यहाँ आएर पनि मैले बाँच्नको लागि मात्रै काम गरेको छु र धेरै समय समाजको लागि दिएको देख्नु भएकै छ । राजनैतिक आधार बलियो बनाएको थिएँ, देश मै बसेको भए सायद नेतृत्वमा पुगी सक्थें होला ! बिबसताले बिदेश पलायन भएपनि सपना त अहिलेसम्म पनि आफ्नै गाउँको मात्र देख्ने छु। राज्यको त सीमा होला, तर आस्था र राष्ट्रियताको सीमा हुँदैन,त्यसैले सबैको प्रतिक्रिया ग्रहण गर्दै जनसम्पर्क समिति र एनआरएनको अभियानमा लागिरहेको छु। केहि पाइएला भनेर संगठनमा लागेको पनि हैन !
बेल्जियम आएपछि सामाजिक अभियानमा कसरि र केको लागि लाग्नु भयो ? यहाँको राजनीतिले नेपालमा अर्थ लाग्छ र ?
जे भएपनि राजनैतिक र सामाजिक भूमिकाले नेपालमै र नेपालीसँगै भएको अनुभूति दिदो रहेछ । सन् २००० मा बेल्जियम आएपछि केहि आस्था मिल्ने नेपालीको सम्पर्कमा आई आस्थावान कांग्रेशहरु मार्फत नेपाली समाज सङ्गठित गर्न तिर लागियो । भेटघाट बढाएँ । ध्रुब पौडेल, सुबास जोशी,जानकी गुरुङ, शेखर कंडेल, राम थापा, गोबिन्द सुबेदी लगायतको सल्लाहमा नेपाली कांग्रेश बेल्जियम नेपाल सम्पर्क समिति बनायौँ । त्यहि बेला सम्म सायद जनप्रगतिशील संगठन स्थापित भैसकेको थियो। त्यो अर्थमा आस्थाको संगठनमा हाम्रो दोश्रो होकि जस्तो लाग्छ । म बिसं २०३० सालमा बाग्लुङ्ग, गल्कोटको मल्म वार्ड ३ जन्मेको हुँ। बुबा आमाले पनि मलाई सामाजिक गतिविधिमा लाग्दा कहिल्यै गालि गर्नु भएन। जिबनमा राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा लाग्न जिबन संगिनी शशिले समेत कहिल्यै अबरोध गरिनन्। मैले मेरा दुई छोरा रोशन र कृष्णलाई समेत सर्वप्रथम नेपाली समाजको सेवा गर्ने प्रेरणा दिन कुनै कसुर छोडेको छैन । सामाजिक भावना भनेको परोपकारको भ्रुण हो र यो चेतनासंग जोडिएर आउछ। र देवता बनेर फुल्दछ। भूगोल यसको बाधक हुन् सक्दैन।
पदीय जिम्मेवारीको कुरा भन्दा कर्तव्यको लागि सचेत हुनु जरुरि छ। सन् २००० अक्टोबर २६ मा ध्रुब पौडेलको संयोजकत्वमा नेपाली कांग्रेशको नेपाल बेल्जियम सम्पर्क समिति बनाउदा देखि म सक्रिय भएर लागेको थिएँ । २००६ मा एनआरएनए बेल्जियम समन्वय परिषदको संस्थापक, पहिलो अधिवेशनमा उपाध्यक्ष,दोश्रो कार्यकालमा संरक्षक, २०१५/१७ मा अध्यक्षको समेत मलाई जिम्मेबारी दिइयो । एनआरएनए एनसीसीको विधान मस्यौदा समितिको प्रमुख र निर्वाचन समितिको संयोजक भएर सर्बसहमतिबाट समिति निर्माण गरि पछिल्लो पटक मतभेदहरुको खातलाई चिर्दै ब्रेक थ्रु गर्न सफल भयौँ । त्यसको लागि मलाइ सबै साथीहरुको साथ रह्यो। बढी त्याग गर्न सक्ने हैसियत बनाएको जनसम्पर्क समितिका साथीहरुको कारण यो सर्वसहमति सफल भएको हो। ति साथीहरु जसले आफ्नो उमेद्वारी फिर्ता लिएर निर्वाचन समितिको पहिलो प्रयासलाई सार्थक बनाइदिनु भयो धन्यबादका पात्र हुनुहुन्छ।
यो एकता, सहमति र सहकार्य मुलुकप्रतिको कर्तव्य डायस्पोरामा समेत विश्वासयोग्य रूपले फक्रँदै गरेको फुल जस्तै लाग्छ मलाई । बिश्वास र सामाजिक एकताको शुरुवात बेल्जियमबाट भएको र युरोप भरि फक्रदै गएकोमा सबैले गर्ब गर्न सक्नु पर्छ ।
अहिले एनआरएनए युरोप संयोजकमा उठ्नु भएको छ, यो पालि जित्ने सम्भावना कत्तिको देख्नु हुन्छ ? कि अघिल्लो पटक जस्तै हारिन्छ ?
सन् २०१७ मा एनआरएनएको युरोप संयोजकको उमेद्वार बनेपछि मेरो अभियानले विश्वव्यापी हुने मौका पायो । मैले आँफुलाई क्षेत्रीय भूमिकामा समाहित गर्न कम्मर कसेर लागेंकै हुँ । २७ जना उमेद्वार मध्ये २४ ले त हार्ने पर्थ्यो। ३ जनाले जिते म हार्नेमा परें। मेरो सांगठनिक अनुशासन,समर्पण र भबिष्य प्रतिको प्रेरणादाई जिम्मेवारीलाई यो पटक पुरा गर्ने छु जस्तो लाग्छ। त्यैपनि केहि साथीहरु मलाई हराउन लागेको देख्दा अचम्म लाग्छ। तर मेरो आग्रह छ, अझै पनि बेल्जियममा एउटा पदमा एक मात्र उठौँ,पुरानो इगो त्यागौं । संगठनले जित्ने हैसियत सहित लागौं !
आगामी भूमिकाबारे थप तपाइको थप भनाई ?
सबै नेपालीको विश्वासले आत्मविश्वास र सङ्कल्प झन् निखारिँदै जाँदोरहेछ । आत्माविश्वासका साथ गरिने मिहिनेत, प्रयास र कर्मलाई समाजले क्रमशः मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ । मेरो पहिलो घर जनसम्पर्क समिति हुँदाहुँदै पनि पहिला एनआरएन गठन गरियो । सन् २००८ मा मात्र तात्कालिक कार्यबाहक पार्टी सभापति शुसिल कोइरालाको निर्देशनमा जनसम्पर्क समिति बनायौँ। सुरुमा बेल्जियम छिर्दा एक किसिमको वातावरण थियो । त्यही रूपमा समाजका तात्कालिक मुद्दाहरूमा सरिक भइयो । त्यो परिस्थितिले सङ्गठनको आधार बनाइदियो र त्यही अनुसार अघि बढियो । पछि केहि साथीहरु खेल्न थाले र विभाजनको प्रयास समेत भयो। तथापि नेपाली कांग्रेशको १२औँ र १३औँ अधिवेशनमा जनसम्पर्क समिति बेल्जियमले महासमिति मार्फत भाग लिने पद्धति मेरै नेतृत्वमा शुरु भयो। एनआरएनएमा समेत २००६ बाट २०१५ सम्म अविछिन्न नेतृत्व गर्न सक्ने हैसियत बनायौँ। हेर्नुस अहिले हामी नेतृत्वमा जाने आधार किन बिग्रियो ? यसको जिम्मा कसले लिने ? यी बिषयमा निष्पक्ष समिक्षा हुनु जरुरी छ ।
तपाइमाथि गंगाधर जहाँ पस्छ भाँजो हाल्छ र संगठनमा दरार पैदा गर्छ भन्ने आरोप छनी के भन्नु हुन्छ ?
त्यसमा मेरो कुनै गुनासो छैन। नदि बग्दा स्वाभाविक आवाज आउछ , मैले सम्पूर्ण जिबनको ठुलो हिस्सा समाजलाई समर्पण गरे झैँ लाग्छ। गतिशील भै रहन्छु। हाम्रो चेतनाले जतिजति उच्च रूप लिँदै जानेछ, त्यसका साथै हामीले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत पेसा वा क्यारियर भन्दा माथि उठेर देश, जनता र सम्पूर्ण मानव जातिलाई समेत देख्न थाल्ने छौ र उनीहरूको कल्याणका लागि बढी भन्दा बढी योगदान दिने कुरा सोच्न थाल्ने छौं । मेरो यो ब्याक्तिबादी प्रवृत्ति विरुद्धको लडाइँ समेत हो भन्ने नबुझ्दासम्म साथीहरुले मलाई बुझ्नु हुन्न । केहि न केहि आरोप लगाएर सन्तुष्टि लिनुहुन्छ। सँधै सक्रिय भैरहने मेरो प्रबृत्ति नै मेरो जिबनको बाँच्ने साहसिक आधार हो। यसमा कसले कस्तो गुनासो गर्छ मलाई मतलब नै हुँदैन ।
क्षेत्रीय संयोजकमा उठ्दै गर्दा तपाइले जितेपछिका एजेण्डाहरु केके हुने छन् ?
मूल लक्ष्य आफू संलग्न संस्थालाई नीति र विधान नियन्त्रित बनाउनु नै हो । पछिल्ला दिनमा एनआरएन अभियानको आदर्श र मूल्य–मान्यतालाई मानब तस्करी,नाफाखोरी,मजदुर लुट्ने सुद खोरी र सरकार समेतलाई भुल भुलैयामा पार्ने ब्यापारिक साझेदारीहरूको चल्तीफिर्तीले संगठन धरायासी हुदै गएकोमा मेरो गम्भीर चिन्ता र चासो छ । हाम्रो एनआरएनए संस्कृति महँगो हुदै गएको छ। मैले एनआरएनएनको ५ स्टार संस्कृतिलाई हटाएर मजदुरको पहुँच स्थापित गरेरै छाड्छु,बिधानत आस्थालाई स्थापित गराएरै छाड्छु । बुदागत रुपमा भन्दा १. युरोप क्षेत्रमा रहेका नेपाली समुदायका लागि गत अगष्ट महिनामा युरोप क्षेत्रीय बैठकद्धारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुरुप आपतकालिन राहत कोष स्थापनाको लागि पहल गर्नेछु । २. गैरआवासीय नेपाली संघका युरोपमा गठन भएका तर निक्रिय राष्ट्रिय समितिहरुलाई सक्रिय बनाइने छ । ३. गैरआवासीय नेपाली संघले उठाउँदै आएका महत्वपूर्ण मुद्दाहरु, नेपालमा सामूहिक लगानी कोष, नागरिकताको निरन्तरता, संस्थागत विकास लगायतका विषयमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलमा सहपाठी दलहरु र सरकारसँग समन्वयन गरी ती मागहरुलाई पुरा गर्न युरोप क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न प्रयत्नशील गर्नेछु । ४. संघको क्षेत्रीय बैठकहरुलाई अझ व्यवस्थित र आर्थिक रुपमा पारदर्शी बनाइने छ । ५. गैरआवासीय नेपाली संघलाई सबै विचार, जात र वर्गको समावेशी बनाउने छु ।६. संघलाई हुने खानेको मात्र नभएर सर्वसाधारणको समेत पहुँच पुग्ने गरि नयाँ नीति तर्जुमा गरि संस्थागत विकासमा जोड दिनेछु । ७. युरोपस्थित नेपाली समुदायमा हुर्किदो दोस्रो पुस्ता तथा युवाहरुको लागि नेपाली भाषा तथा संस्कृति सिकाउने उद्देश्यले हरेक राष्ट्रिय समितिमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यिनै कुराहरु हुन् ।
समाजसेवामा लाग्ने एनआरएन पितामहहरुले त आर्थिक सवलता नभई समाजसेवा गर्न हुँदैन , सकिदैन भन्छन नि !
ती नब धनाढ्यहरुका सेखी हुन्। आर्थिक अवस्थाले सामाजिक सेवाको निर्धारण कदापि गर्दैन । चेतना सहितको दायित्वबोध समाजसेवाको महत्वपूर्ण पक्ष हो। अहिलेको समाजमा केहि मानिसहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र व्यवहार गर्दछन् । नोकरी गर्ने, घरसम्पत्ति जोड्ने मात्र काम गर्दछन्, धेरै पैसा कमाउँछन् । समाजले उनीहरूलाई इज्जत गर्छ । एक करोड वा अरब जम्मा गरेको अवस्थामा ठूलो सम्मान हुन्छ । कुनै व्यक्तिले त्यस विषयमा ध्यान दिएन र समाज परिवर्तनमा लाग्यो भने ऊ बहुला ठानिन्छ । यो सब चिन्तनको कुरा हो। मैले यहि ब्याक्तिबादी खराब चिन्तनको बिरुद्ध संघर्ष गरिरहन्छु । समाजबाद आफूबाट लागु गर्ने कुरा हो जुन सामाजिक चिन्तनसंग अभिन्न रुपले जोडिएको हुन्छ। यसैको लागि हो मेरो लडाइँ ।
नेपाल फर्कने नफर्कने के छ बिचार सम्झनाले मात्रै देश सेवा हुन्छ र ?
हामीले आफ्नो सुखका लागि पनि समाजको, देशको विकासलाई सम्झनुपर्छ । देशको निर्माणका लागि लाग्नुपर्दछ । हाम्रो जिम्मेवारी आफ्नो लागि मात्रै हुनुहुन्न । समाज र देशप्रति पनि हुनुपर्दछ । धेरै मान्छेको त्यस्तो सोचाइ छैन । उनीहरूलाई आफ्नो मात्रै चिन्ता हुन्छ । व्यक्तिगत फाइदाका लागि जे पनि गर्न तम्सिने संस्कार बढेकोमा दुख लाग्छ ।
तैपनि बेल्जियम बसुन्जेल सामाजिक र चेतना वा आस्थागत संगठन मार्फत समाज सेवा गरिरहने संकल्प गरेको छु । त्यसैले एनआरएनए युरोप संयोजकमा समेत दोश्रो पटक उठेको छु। यो संगठनबाट समेत मातृभूमिको लागि धेरै गर्न सकिने सम्भावना छ । तर नयाँ अवधारणा र नयाँ योजना ल्याउने कला र जाँगरको आबस्यकता हो ।एनआरएनए आफैले जन्माएकोले अति नै माया लाग्छ। त्यतिबेला युबराज गुरुङ,जानकी गुरुङ,रबिन्द्र मान श्रेष्ठ, रजनी प्रधान,शुबास जोशी लगायतका थुप्रै साथीहरु मिलेर एनआरएनको बेल्जियम शाखा खोल्यौँ र नेपाली संस्कृति चिनाउन नेपाल महोत्सवको सुरुवात गर्यौं । सांस्कृतिक, खेलकुद र शैक्षिक कार्यक्रम मार्फत दोश्रो पिढीलाई समेट्ने अवधारणा समेत ल्यायौँ । हामीले त्यो बेला राम्रा योजना बनाएका थियौं , तर सोचेजस्तो साथ पाएनौं ।
जनसम्पर्क समितिमा किन तपाइलाई असफल चाणक्य भन्दछन, के भन्न खोजेका हुन् साथीहरुले ?
अरूले मलाई नबुझेका हुन् वा मैले नबुझेको हुँ थाहा भएन । हाम्रा केहि अभियान सफल पनि भए भने केहि प्रयासहरू अझै पूर्ण सफल भै सकेका छैनन्। अभियानहरु अहिलेसम्म सफल नहुनुमा मेरो मात्र दोष छैन ! संगठन पनि एउटा सरिर जस्तै रहेछ। शरीरमा विभिन्न संक्रमण भइरहन्छन् । रोगले आक्रमण गरिरहन्छ । मानिसले शरीरलाई संक्रमणबाट बचाउन पौष्टिक आहार, सरसफाइ वा औषधिमूलोको सहारा लिँदै आइरहनु परेको छ । प्रदुषणबाट शरीरलाई जोगाउनुपरेको छ । सबैले आफ्नो रोग पहिचान गर्यौ भने संगठन भित्रको रोग सकिन्छ। हाम्रो संगठन मनोरोगको शिकार भएको हो,त्यो बेला देखि अहिले सम्म । संगठन भित्र हुने बिचारको द्वन्दलाई संक्रमणबाट बचाउन सक्ने कार्यकर्ता हुन् । त्यसको अर्को औसधि नेतृत्वको सोचमा रुपान्तरण पनि हो। अब धेरै विदेश बस्ने रहर पनि छैन, २०२५ साल भित्र नेपाल फर्किने सोच बनाएको छु। बसुन्जेल जहाँ बसिन्छ त्यसबारे सकेजति गरिएकै छ ।
साहित्यकार लील बहादुर छेत्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार
अमेरिकाका राज्य सिनेटरद्वारा ढकाल समक्ष भ्रमण वर्षमा नेपाल जाने प्रतिज्ञा
लीलबहादुर क्षेत्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार